Guryaha taariikhaha | Cuntada Nutri
Paul Heidemeyer | | Alimentos, Nafaqeyn
Taariikhaha ayaa ka soo baxa timir timir ah oo waxaan ka heli karnaa in ka badan lix kun oo sano ka hor. Beeristeeda waxay ka bilaabatay Koonfur-bari Aasiya iyo Waqooyiga Afrika, aakhirkiina waxay ku fiday dalal diiran.
Midhaha geedka timireed waxay leeyihiin hanti badan oo dad badani ka warqabinSidaa darteed, waxaan halkan u nimid inaan kuu sheegno waxa faa'iidooyinkiisu yihiin iyo waxa ay kuu qaban karaan.
El taariikhda sida miraha waa qaab oval ahMidabkiisu waa bunni, hilibkiisuna waa adag yahay waana macaan yahay gudahana waxaan ka helaynaa laf dheeri ah. Waxaan heli karnaa muunado dherer ahaan gaaraya 4 sentimitir. Sidii aan soo sheegnay, beeritaankeedu wuxuu ku urursan yahay aagagga Bariga Dhexe, Waqooyiga Afrika iyo meelaha qaarkood ee Kaalifoorniya. In kasta oo hadda, waxaan ka heli karnaa meelo kala duwan oo adduunka ah.
Badanaa waxaa lagu daraa kooxda lowska, waxaa loola dhaqmaa si la mid ah sabiib ama abrikot la qalajiyey, si kastaba ha noqotee, timirtu wey koraan oo weynaadaan geedka laftiisa.
Sidaad ogtahay, ma jiro hal nooc oo taariikh ahHad iyo jeer waxay ku xirnaan doontaa nooca geedka timirta. Waxaa la sheegay in tayada timirta ugu wanaagsan laga helo aagga of Tunisia, waxay leeyihiin maqaar aad u siman, fiican oo madow. Dhanka kale, timirta turkishka Iyaguna aad bay caan u yihiin, midab ahaan way ka madow yihiin oo waa ka jilicsan yihiin. Ugu dambeyntii, waxaan ka heli taariikhaha, ka Elche kuwaas oo tayo sare leh.
1 Sida loo cuno timirta
2 Guryaha iyo waxtarka timirta
3 Talooyin ku saabsan la macaamilka taariikhaha
Sida loo cuno timirta
In cuntada mediterranean Si ballaaran ayaa loo isticmaalaa, waxaana loo isticmaali karaa labadaba macmacaanka, sida cuntada ugu weyn ama nooc kasta oo saxan ah.
Marka lafta la saaro, waxaan ka buuxin karnaa xoogaa miro la qalajiyey ama waxoogaa jiis ah.
En Giriiga iyo Turkiga, Waxay si wadajir ah ugu diyaariyaan hilib iyo kalluun.
Waan heli karnaa geed khal, waa la samayn karaa - chutney, qaab baastada iyo miraha loogu talagalay alaabada rootida.
Waa inaanan iloobin taas geedo burooyinkeedaGeedka timirta waxaan ka helnaa qalbiyada timirta, oo loo isticmaalo saladhka.
Guryaha iyo waxtarka timirta
Timirtu waxay na siisaa nafaqeyn weyn oo jirkeennu u qaato tamar maalintii. Taariikhaha waxaa lagu gartaa inay na siiso tamar badan isla markaana hagaajiso niyadda.
Marka xigta waxaan kuu sheegeynaa maxay yihiin faa'iidooyinka ugu wanaagsan ee aan ka helno taariikhaha.
Waxaa lagugula talinayaa inaad ku cunto timir gudaha muddada waxbarashada ama markii loo baahdo qadar dheeraad ah oo tamar ah.
Waxay kordhiyaan awoodda maskaxda iyo firfircoonaanta.
Waa cunto hodan ku ah antioxidant amino acids.
U dagaallama sidan xagjirnimo lacag la’aan ah.
Waxay bixiyaan hydrates of kaarboon, potassium, fosfooraska, kaalshiyam y mangnesium.
Waxaa ku jira aashito pantothenic, loo baahan yahay si dufanka loogu beddelo karbohaydraytyo iyo tamar.
Taariikhda ayaa naga caawinaysa inaan ku soo bandhigno isboortiga aan ugu jecel nahay. Waa soo-saare si loo abuuro murqaha.
La dagaallama diiqada la walaac oo naga caawisa inaan seexanno.
Naga hor joogso dhacdooyinka walaaca.
Waxay hodan ku tahay fiber, sidaa darteed, waxay naga caawinaysaa inaan la dagaallano calool istaagga.
Waxay ka caawisaa yaraynta kolestaroolka dhiigga ku jira. Kuma jiraan dufanka waxayna ka caawiyaan nidaaminta heerarka.
Waxay wanaajiyaan oo ay ka qaybgalaan dheef-shiidka wanaagsan, waxay yareeyaan kuwa calool istaag, gaaska wuu iska ilaaliyaa wuxuuna ka qeyb qaataa in culeys badan uusan helin.
Waxay bixisaa sonkor muhiim ah oo na siisa tamar. Sonkorta dabiiciga ahi waa gulukoos, fructose iyo sukrose.
Waxay hodan ku yihiin birta, sidaas darteed isticmaalkiisa waxaa lagula taliyaa dhammaan kuwa haysta dhiig yaraan, ama dadka waayeelka ah ee u baahan xoogaa tamar dheeraad ah.
Dhanka kale, hodanka ku ah macdanta potassium oo aad ugu yar sodium, timirtu waxay caawisaa nidaaminta nidaamka neerfaha.
Talooyin ku saabsan la macaamilka taariikhaha
Taariikhuhu waxay leeyihiin nolol dheer, in kastoo taasi macnaheedu ahayn inaysan xumaanayn. Waa inaad taqaanaa sida loo kaydiyo loona ilaaliyo si fiican si aysan uga sii darin. Sidaa darteed, waxaan kugula talineynaa in lagu keydiyo dhalooyinka hawada gala iyo kuwa qalalan, meel aan iftiinka u soo if bixin.
Sidaan soo sheegnayba, timirtu waxay qani ku tahay nafaqooyin aad u tiro badan iyo macdano, sida kaalshiyamka, fosfooraska, potassium, magnesium iyo fiitamiinada kooxda B, provitamin A, C iyo D.. Ha ka waaban inaad ku soo bandhigto cuntadaada si aad uga faa'iideysato dhammaantood. Waxaad cuni kartaa iskucelcelis ah 3 iyo 5 taariikheed maalintii.
Dhadhankoodu waa macaan yahay, iyagu waa dhergin waana lagu cabi karaa cunnooyinka khafiifka ah, si kastaba ha noqotee, waa inaanan ku xadgudbin maxaa yeelay waxay hodan ku yihiin sonkorta, in kasta oo ay faa'iido leh ayaa wax ka bedeli kara miisaankaaga oo yaraada.
Sidaad aragtay, timirtu waa macmacaan la cuni jiray kumanaan sano, midhahan yar ee geedka timirta ah waxaa laga heli karaa ficil ahaan dhamaantiis dukaamada waaweyn, suuqyada iyo dukaamada waaweynSi kastaba ha noqotee, tayadiisu way kala duwanaan doontaa iyadoo kuxiran meesha ay ka timaado.
Raadi tayada ugu fiican oo soo ogow halka ay ka yimaadeen taariikhaha aad ugu jeceshahay, hubaal waxaad ka heli doontaa qaar aad jeceshahay oo aad ku samayn karto cuntooyin macaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Nafaqeyn » Guryaha taariikhaha
Cunnooyinka Uric acid-ka la mamnuucay
Suuxdinta dabiiciga ah, Dhego yare